သွယ်လျပြေပြစ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေးရဲ့ အသည်းယားစရာ အလှတွေကို လှစ်ဟပြသလိုက်တဲ့ ဆောင်းယွန်းစံရဲ့ ဗီဒီယိုလေး – Real Link
သွယ်လျပြေပြစ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေးရဲ့ အသည်းယားစရာ အလှတွေကို လှစ်ဟပြသလိုက်တဲ့ ဆောင်းယွန်းစံရဲ့ ဗီဒီယိုလေး
ပရိသတ် ကြီးရေ …… မင်းသမီးချော လေး ဆောင်းယွန်းစံ ကတော့ အနု ပညာ လောက မှာ နေရာ တစ်ခုကို ရယူ ထားနိုင် ခဲ့ပြီး ပါဝင်သရုပ်ဆောင် တဲ့ ဇာတ်ကားတိုင်း မှာ အကောင်းဆုံး နဲ့ အပီပြင် ဆုံး သရုပ်ဆောင် နိုင်တာ ကြောင့် ပရိသတ်တွေ ရဲ့ အားပေး ချစ်ခင်မှု ကို အချိန်တို အတွင်းရရှိ ခဲ့တာ ဖြစ်ပါ တယ်..။ ချစ်စရာ ကောင်းလွန်း တဲ့ အပြုံးလေး တွေ ကို ပိုင်ဆိုင် ထားနိုင် ခဲ့ တဲ့ သူမ ကတော့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေ မှာ လည်း ပါဝင် သရုပ်ဆောင် နေတာ ဖြစ်သ လို ကြော်ငြာတွေ လည်း ရိုက်ကူး နေတာ ဖြစ်ပါတယ် နော်..။
ဆောင်းယွန်းစံ ဟာ ရွှေကြို တစ်ယောက်အနေ နဲ့ အနု ပညာ လမ်းကြောင်းပေါ် စတင် ရောက်ရှိခဲ့ တာ ဖြစ်ပြီး ကျစ်လျစ် သွယ်လှတဲ့ ဘော်ဒီအချိုး အစား လေး ဟာလည်း ပုရိသတွေ ရဲ့ အသည်းစွဲ ပါပဲ နော်..။ သူမ ဟာ အားလပ် ချိန်လေး တွေမှာ ဆိုရင် လည်း Tik Tok ဗီဒီယို တွေကို ရိုက်ကူး လေ့ ရှိပြီး ချစ်စရာ အမူအရာ လေး တွေကြောင့် ပရိသတ် အားပေးမှု ရရှိနေ တာ ပါ..။
အခု ဆိုရင် လည်း ဆောင်းယွန်း ဟာ ရှုတင်နားတုန်း လေးမှာ ချစ်စရာ မခို့ တရို့ အမူအရာ လေးတွေ နဲ့ Tik Tok လေး ဆော့ပြီး သူမ ရဲ့ Tik Tok acc လေးမှာ တင်ပေးလာခဲ့ ပါ တယ်..။ ဆောင်းယွန်း ဟာ မြန်မာ ဆန်ဆန် ဖက်ရှင်လေးနဲ့ ရိုးရိုး ယဉ်ယဉ် လေး ဝတ်ကာ အလှကြီး လှနေတာ ဖြစ်ပါ တယ်..။ ကဲ …. ပရိသတ် တွေ အတွက် ပြန်လည် မျှဝေ ပေးလိုက် ပါ တယ် နော်…။
Photo credit -Saung Yoon San’s Facebook acc
ပရိသတ္ ႀကီးေရ …… မင္းသမီးေခ်ာ ေလး ေဆာင္းယြန္းစံ ကေတာ့ အႏု ပညာ ေလာက မွာ ေနရာ တစ္ခုကို ရယူ ထားနိုင္ ခဲ့ၿပီး ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ တဲ့ ဇာတ္ကားတိုင္း မွာ အေကာင္းဆုံး နဲ႔ အပီျပင္ ဆုံး သ႐ုပ္ေဆာင္ နိုင္တာ ေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြ ရဲ့ အားေပး ခ်စ္ခင္မႈ ကို အခ်ိန္တို အတြင္းရရွိ ခဲ့တာ ျဖစ္ပါ တယ္..။ ခ်စ္စရာ ေကာင္းလြန္း တဲ့ အျပဳံးေလး ေတြ ကို ပိုင္ဆိုင္ ထားနိုင္ ခဲ့ တဲ့ သူမ ကေတာ့ ဇာတ္လမ္းတြဲေတြ မွာ လည္း ပါဝင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေနတာ ျဖစ္သ လို ေၾကာ္ျငာေတြ လည္း ရိုက္ကူး ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္ ေနာ္..။
ေဆာင္းယြန္းစံ ဟာ ေရႊႀကိဳ တစ္ေယာက္အေန နဲ႔ အႏု ပညာ လမ္းေၾကာင္းေပၚ စတင္ ေရာက္ရွိခဲ့ တာ ျဖစ္ၿပီး က်စ္လ်စ္ သြယ္လွတဲ့ ေဘာ္ဒီအခ်ိဳး အစား ေလး ဟာလည္း ပုရိသေတြ ရဲ့ အသည္းစြဲ ပါပဲ ေနာ္..။ သူမ ဟာ အားလပ္ ခ်ိန္ေလး ေတြမွာ ဆိုရင္ လည္း Tik Tok ဗီဒီယို ေတြကို ရိုက္ကူး ေလ့ ရွိၿပီး ခ်စ္စရာ အမူအရာ ေလး ေတြေၾကာင့္ ပရိသတ္ အားေပးမႈ ရရွိေန တာ ပါ..။
အခု ဆိုရင္ လည္း ေဆာင္းယြန္း ဟာ ရႈတင္နားတုန္း ေလးမွာ ခ်စ္စရာ မခို႔ တရို႔ အမူအရာ ေလးေတြ နဲ႔ Tik Tok ေလး ေဆာ့ၿပီး သူမ ရဲ့ Tik Tok acc ေလးမွာ တင္ေပးလာခဲ့ ပါ တယ္..။ ေဆာင္းယြန္း ဟာ ျမန္မာ ဆန္ဆန္ ဖက္ရွင္ေလးနဲ႔ ရိုးရိုး ယဥ္ယဥ္ ေလး ဝတ္ကာ အလွႀကီး လွေနတာ ျဖစ္ပါ တယ္..။ ကဲ …. ပရိသတ္ ေတြ အတြက္ ျပန္လည္ မၽွေဝ ေပးလိုက္ ပါ တယ္ ေနာ္…။
Previous post အသည်းယားစရာ ကောင်းတဲ့ ရင်ဖိုဖွယ် ကောက်ကြောင်းလေးတွေ ထင်ရှားပေါ်လွင်နေတဲ့ သွန်းဆက်ရဲ့ ပုံရိပ်လေးများ
Next post မခို့တရို့ပုံစံလေးနဲ့ ဝင်းမွတ်စိုပြေနေတဲ့ အတွင်းသားအလှအပတွေ ထုတ်ပြလိုက်တဲ့ ဖူးပွင့်သခင်ရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးတွေ